Intangible assets identified bankruptcy proceedings, description <span style="border-left: none; border-right: none;">Intangible assets consist of $<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;">2,766,000</span></span></span></span></span> of proprietary knowledge and technology, which is being amortized over <span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">20</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> years and $<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">1,113,000</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> of customer contracts, which has been amortized over <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">2.5</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> </span>years, and is fully amortized.</span> In addition, included in intangible assets is $<span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">28,820</span></span></span></span></span></span></span></span></span> of trademarks and $<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">5,300</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span> of website costs that are being amortized over <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">5</span></span></span></span></span></span></span> </span>years.
Inventory $ 0 $ 0 $ 0 $ 0
Goodwill impairment $ 2,938,653
Accumulated amortization 30,589 $ 30,589
Amortization expense 10,196 $ 20,393
Concentration risk, percentage 88.00%
Number of customers | Customer 2 1
Short-term investment 0 $ 0 $ 0
Cash and cash equivalents 16,112,907 173,902 16,112,907 173,902 $ 1,625,671 $ 1,368,395
Accounts receivable balance 306,143 306,143
Reimbursement from licensee for project costs 102,217 102,217
Deferred contract costs 203,926 203,926
Accumulated amortization $ 20,393
License consideration, description In consideration for the License, during the initial term, the Licensee agreed to pay the Company a royalty of (x) <span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;">five</span></span></span></span></span></span> percent (<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">5</span></span></span></span></span></span>%) on the first $<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">20,000,000</span></span></span></span></span></span></span> of gross revenues derived from the Licensee’s commercialization of the License (net of customary discounts, sales taxes, delivery charges, and amounts for returns) (the “Gross Revenues”), (y) <span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;">four</span></span></span></span></span></span> and <span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;">one</span></span></span></span></span></span>-half percent (<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">4.5</span></span></span></span></span></span></span>%) on the next $<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">30,000,000</span></span></span></span></span></span></span> of Gross Revenues, and (z) <span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;">five</span></span></span></span></span></span> percent (<span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">5</span></span></span></span></span></span></span>%) on all Gross Revenues thereafter (collectively, the “Royalty”),
Description of restricted shares refusal agreement Under the Agreement, the Company has a right of first refusal with respect to being engaged as a designer and builder of any real estate projects for which CMC has secured the rights to develop and in which CMC has a greater than <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;">fifty</span></span></span></span> percent (<span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">50</span></span></span></span></span>%) interest in the owner or developer entity and has the right to select the builder for such real estate project (the “<span style="font-style: italic;">ROFR Rights</span>”). In exchange for such ROFR Rights, the Company agreed to issue to CMC <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">2,500</span></span></span></span></span> shares of restricted stock of the Company’s common stock, of which <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">1,250</span></span></span></span></span> shares will vest and be issued on September 30, 2020 and the remaining <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">1,250</span></span></span></span></span> shares will vest and be issued on September 30, 2021, unless the Agreement is earlier terminated. In the event that the Agreement is earlier terminated, CMC will still be entitled to receive the entire amount of such restricted stock that has vested as of such earlier termination date, but in no event less than <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">1,250</span></span></span></span></span> shares of such restricted stock. The Agreement also provides for customary indemnification and confidentiality obligations between the parties. The <span style="border-left: none; border-right: none;"><span class="ng-scope" style="border-left: none; border-right: none;"><span style="display: inline;"><span style="border-left: none; border-right: none;"><span style="border-left: none; border-right: none;">2,500</span></span></span></span></span> shares of restricted stock of the Company's common stock has yet to be issued to CMC.
Accumulated amortization 1,686,876 1,541,753 $ 1,686,876 1,541,753
Amortization expense $ 36,281 $ 36,281 $ 72,561 $ 72,562
Concentration risk, percentage 75.00% 92.00%
Concentration risk, percentage 92.00%
Concentration risk, percentage 72.00% 91.00% 69.00% 87.00%
Number of customers | Customer 2 3 2
Concentration risk, percentage 51.00% 92.00%
Number of vendors | Vendors 2 3 4 3